Ukurhola iBhlog: Iposi yokuZithemba | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 9, 2007 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
I-tippee yam elandelayo nguRyan oqhuba ibhlog yoshishini, ebizwa Iposi yokuZithemba. Iposi elizimeleyo yibhlog malunga nendlela yokwenza imali ngeshishini lasekhaya elikwi-intanethi kunye nezinye iingcinga ezinxulumene nalo. (Ndisikrwece isivakalisi sokugqibela kwi malunga iphepha.)
Doh! Ngaba ndigqibile ukugaxelwa? Ukuqala kwam ukuqaphela igama lethambeka kunye nabo bonke abo bahanahanisi, yile ngcinga yokuqala endibethileyo. Emva kokuba ndiyakhele imithambo-luvo yokucofa, emva koko ndafumana indawo efanelekileyo. Ndandiba nexhala kuqala, phofu!
Unokufuna ukuqwalasela nzulu ukufumana igama elitsha lesizinda. Oko kwathethileyo- akukho sidingo sokuphulukana naluphi na uhlobo okwangoku. Qalisa ngokulula ukuphelisa le thambeka kwaye usebenzise entsha kwindawo yakho. Olu luluvo lwam lonke, ewe!
Kukho into emnandi eqhubekayo kunye nephepha lakho lesitayile. Unyaweni ushiyeke ulungelelanisiwe kwaye iziko (umxholo) div alihambisi ubude bephepha kunyawo. Ndithatha uqikelelo, kodwa ndicinga ukuba unokuba nenqaku lokuvala eliqaqambileyo lokujikeleza (> / div>) kwiphepha lakho eliphambili. Amanye amaphepha abonakala enikezela ngokuchanekileyo.
Nantsi elungileyo… ubusazi ukuba ii-Injini zokuKhangela azihambi kuwo wonke umxholo kwiphepha lewebhu? Batsala umxholo ukusuka phezulu ephepheni ukuze babone amagama aphambili kwaye babalathise ngokufanelekileyo. Ukuba ufuna ukuba nomxholo oqhuba ukubekwa kweinjini yokukhangela, qiniseka ukutyhala umxholo phezulu kwiphepha. Uyilo lwakho, ubeka zombini iibhola ezisecaleni ngaphambi komxholo wakho! Ngaphandle kokuwenzakalisa umxholo wakho konke konke, kuya kufuneka ukwazi ukuhambisa umxholo we-div ngaphezulu kweebar ezisecaleni kwaye uqalise ukukhangela umxholo ngokufanelekileyo.
Wenze umsebenzi olungileyo wokuchonga idilesi yakho yokondla kwibar esecaleni kwakho kodwa ndifumene i-goof enokukukhathaza! Kwintloko yakho kukho iseti yamanye amakhonkco akhomba kwi-RSS feed yakho. Izikhangeli zisebenzisa eli khonkco enye ukubonisa i "RSS" iqhosha kuzo ukuze ubhalise ngokulula. Ingxaki kukuba enye ikhonkco yidilesi yakho yokutya engundoqo (kukho ikhonkco kule ndawo kwicala lasekhohlo malunga nesiqingatha sendlela). Unokubanabantu abaninzi ababhalise kwindawo yakho kunokuba ucinga ngokuba abalinganiswa nabo Isongezelelo.
Ukulungisa i-header, fumana le migca mithathu:
Faka endaweni yale:
Ndiza kucima ngokulula amakhonkco okondla kwicala lasekhohlo kuba abantu baya kuyifumana ngesimboli yokondla okanye ngebrawuza.
Izihloko zithathela ingqalelo-hayi eyabafundi kuphela kodwa nee-Injini zokuKhangela. Izihloko zezithuba zakho zi-h3 ngelixa izihloko zecandelo lebar esecaleni kwakho ziyi-h2. Kukho ithuba elifanelekileyo lokuba iiNjini zoPhando zikubeka kwinqanaba eliphezulu kwikota Izimvo yakutshanje ngaphezu Yenza imali ngeeNtengiso zeMxholo. Uya kudinga ukuguqula iphepha lakho lesitayile kunye nomxholo wakho ukulungisa le micimbi.
Undibhangisa ngokubeka ikhonkco elithi "Nxibelelana nam". Xa ndicofa kuloo nto, ndizisiwe kwiphepha apho ndingenakunxibelelana nawe! Doh! Ndicinga ukuba ifom yoqhakamshelwano iya kubonakala ilungile kwelo phepha!
Nceda ulandele lo msebenzi kwaye uqiniseke ukuba ufunda enye yam UkuBhloga-Ukuthimba iiFandesi zePGA, ngakumbi ngokubhekisele kwiirobhothi.txt kunye nemephu yesayithi.xml. Ndiyakholelwa ukuba ungabuphucula kakhulu ubukho bakho bewebhu kunye nobukho benjini yokukhangela kunye neengcebiso kweso sithuba!
Oko kuya kukugcina uxakekile okwethutyana! Enkosi ngokundivumela ukuba ndikhangele ibhlog yakho! Andicingi ukuba uninzi lwabantu luyaqonda ukuba uninzi lwefuthe lesitayile kunye nolwakhiwo olunokudlala njani kwiNjini yokuKhangela. Isebenzile indawo yam kancinci kwaye ndiyathanda ukudlulisa kwiingcebiso umntu andifundise zona!
tags: iathom 0.3iingcebiso zokubhulogaidilesi yokondlaidilesi yokubonisa okuphezuluuShishinoI-rss 0.92I-rss 2rss ikhonkco